Vao andro voalohany:6 , 4 MILIARA DOLARA -
AccueilRaharaham-pirenenaVao andro voalohany:6 , 4 MILIARA DOLARA
02/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vao andro voalohan’ilay “Conférence des Bailleurs et Investisseurs” , nisokatra omaly, tao amin’ny foiben’ny Unesco tany Paris dia efa nihoatra ny niheverana azy ny fahombiazana azo. Nahatratra 6,4 miliara dolara ny vola azo avy amin’ny Bad na ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana , ka ny filohany Akinwumi Adesina no nanambara izany, omaly.
Na mbola vao ny Bad irery ihany aza no nanonona ny vola omeny antsika, dia efa nihoatra sahady an’ilay vola tadiavintsika no azo tamin’ity andro voalohany ity. Raha 3,4 miliara dolara no tadiavintsika dia efa io 6,4 miliara dolara io sahady no azo tamin’io andron’ny alakamisy voalohan’ny volana Desambra io. Raha kajiana amin’ny ariary izany 6,4 miliara dolara izany dia kaontenera amam-polony vao omby an’izany. Ny tetikasam-pampandrosoana voafaritra ao anatin’ny Pnd na ny drafi-pampandrosoana Nasionaly ho an’ny Fampandrosoana no nitadiavana mpamatsy vola, ka nanaovana an’ity kaonferansa ho an’ny mpamatsy vola an’i Madagasikara natao any Paris ity.
Mahatratra 5 miliara dolara ny totalim-bidin’ny famatsiam-bola amin’ireo tetikasam-pampandrosoana an’i Madagasikara voafaritry ny Pnd io. Ny 1,6 miliara dolara no teo am-pelatanana. Ny ahitana 3,4 miliara dolara izany no tanjona tamin’ity “ Conférence des bailleurs” ity, ka izao efa azo soa amantsara izao. Nisy amim-bava lavitra indray aza. Ny sehatry ny Angovo, fambolena, fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina , ny fanabeazana, ny famoronan’asa ho an’ny tanora, ny fahasalamana ,ny teknolojia vavao …no sehatra ampiasaina an’ireo vola ireo ary hipaka mivantana any amin’ny vahoaka ny fiantraikany. Ireo tetikasa rehetra ireo dia hampihena ny fahantrana sy hampihena ny elanelana misy eo amin’ny mpanam-bola sy ny mahantra.
Isika Malagasy no mpikarakara ary tonga namaly ny antso avokoa ireo mpamatsy vola toa ny Banky iraisam-pirenena izay nosoloin’i Karl Mundl tena
( solontenan’i Banky Iraisam-pirenena aty Afrika) , ny avy amin’ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana nosoloin’ny filohany Akinwumi Adesina tena. Efa tonga taty Madagasikara izy io ny taona 2015 ary nahita fa tsy tokony hahantra toa izao ny Malagasy. Niteny an’ireo mpamatsy vola namany izy mba hanampy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka dia izao niharihary izao ny fahombiazan’izany. Teo koa ny avy amin’ny Oif nosoloin’i Michaëlle Jean tena, ny avy amin’ny vondrona Eropeana , ny avy amin’ny vondrona Afrikanina.
Niompana indrindra tamin’ny fivoriana niarahana tamin’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena io andro voalohany io ary anio kosa no iompana amin’ny mpamatsy vola tsy miankina. Ireo minisitra mitana ny sehatra stratejika moa dia any an-toerana avokoa ary miasa andro aman’alina mivory mitady izay mahasoa. Mbola hitombo lavitra araka izany ny vola ho azontsika. Anio hariva moa dia hanao tatitra mikasika ny vola voaangona rehetra ny delegasiona malagasy any an-toerana. Hiainga amin’izay ny tena fampandrosoana an’i Madagasikara, hoy ny Filoha. “Tsara fanombohana ity kaonferansa ho an’ny mpamatsy vola ity satria vao niandoha dia efa nahitana vokatra tsara. Efa niroso tamin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara isika ary vao mainka handeha mafimafy kokoa. Izahay dia tena vonona hampihatra an’izany fampandrosoana izany any an-tokantranon’ny vahoaka tsirairay ”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny lahateniny. Nandray fitenenana tamin’ity fotoana ity koa moa Michaëlle Jean sekretera jeneralin’ny Oif sy Karl Mundl avy amin’ny Banque Mondiale. Nivoitra tamin’ny kabariny fa fisokafan’i Madagasikara amin’ny pejy vaovao ny fahombiazana vitany tamin’ny fandraisany ny Frankofonia. Fiaingana vaovao ho an’i Madagasikara araka izany ity Conférence des Bailleurs ity. Mazava be ny lalana ho an’ny fanarenana ny firenena sy ny fanatrarana ny 6,5 isan-jato ny tahan’ny harin-karena foibe hatramin’ny 2019. Tsy ho nofy intsony izany amin’izao satria efa eo am-pelatanana ny vola.
Tsy tonga nanohina ny antson’ny Ceni amin’ny fampitahana, na « confrontation » ireo firaketana an-tsoratra isaka ny biraom-pifidianana, ireo solontenan’ny kandidà mpanara-maso ny fanisam-bato avy amin’ ny kandidà Andry Rajoelina. Tsy araka ny vava navoakan’izy ...Tohiny
Mpiasam-panjakana manao propagandy : Hotorian’ ny DFP